बाँडफाँड भयो दोर्दी खोला जलविद्युतको आईपीओ, कसरी हेर्ने नतिजा ? - Khabar Center
बाँडफाँड भयो दोर्दी खोला जलविद्युतको आईपीओ, कसरी हेर्ने नतिजा ?
८ आषाढ २०७९
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको वेबसाइट र मेरो सेयर एकाउन्टबाट आईपीओको नतिजा हेर्न सक्नेछन् । साथै, दोर्दी खोलाको वेबसाइट तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङले आइपीओ रिजल्ट हेर्न बनाएको वेबसाइट https://iporesult.cdsc.com.np/ बाट पनि रिजल्ट हेर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति :आषाढ ८ २०७९ बुधवार - ११:१३:५८ बजे
दिलमाया मृत्यु प्रकरण: अझै भेटिएन् उनले चलाउने मोवाइल, किन चुक्दैंछ प्रहरी प्रशासन?
आजदेखि खुल्यो हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओ, कति दिने आवेदन ?
ओरालो लाग्यो नेप्से, कारोबार रकम भने १ अर्बमा सिमित
३ कम्पनीको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कुन कम्पनीको कति ?
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा कर्मचारीको माग, कहिलेसम्म दिनुपर्ने आवेदन ?
बैंकहरुको निक्षेप एकैदिन ५ अर्बले बढ्यो, कर्जा लगानी कति ?